192.168.8.1 - Ahoana no fomba hahitanao ny IP default amin'ny router?
Ahoana ny fomba hahitanao ny IP default amin'ny router?
Raha te hanamboatra ny router, tsy maintsy miditra ao ianao. Ka ataovy izany, tokony ho azonao ny IP adiresy. Azonao atao ny miantoka ny adiresy IP ny router. Ny adiresy IP dia manana isa 4 nisoratana tamina fijanonana feno. Adiresy IP misy tambajotra eo an-toerana no hanomboka amin'ny 192.168. Matetika ny Routers dia misy adiresy IP toy ny 192.168.0.1 na 192.168.1.1. Miankina amin'ny solosaina na ny fitaovana, ny fomba hahitanao ny adiresy IP an'ny router dia samy hafa. Ireto ambany ireto ny dingana ho an'ny tsirairay.
Voalohany, tsy maintsy manazava ny tenanao amin'ireto anarana 2 ireto ianao - "router IP" & "vavahady IP default." Ny IP an'ny router dia miasa toy ny fidirana eo anelanelan'ny fitaovanao sy ny Internet midadasika ary izany no antony ahafantarana azy hoe “adiresy vavahady IP default. ” Ny fitaovana rehetra mifandray amin'ny tambajotra mitovy dia mampita ny takian'izy ireo amin'ny alàlan'ny default amin'ny router. Fitaovana samihafa no hiantsoana azy amin'ny fomba hafa. Windows PCS dia hanome anarana azy io hoe 'default gateway' fa kosa ny fitaovana iOS dia hitahiry ny adiresy IP an'ny router etsy ambany 'router.'
Aorian'ny ahitanao ny Default Router IP dia azonao atao ny manoratra azy io ao amin'ny baran'ny adiresy web browser hidiranao ny interface web an'ny router.
Mandehana any amin'ny baiko haingana amin'ny alàlan'ny famerenana ny bara fikarohana & manoratra 'cmd'. Miseho ny varavarankely amin'ny mainty izay ilainao ny manoratra 'ipconfig'. Ho an'ny adiresy vavahady default hijerena valiny.
Ireto ambany ireto ny dingana mora indrindra hijerena ny IP router:
Tsindrio ny Apple menio (eo amin'ny tampon'ny efijery)
Select 'Rafitra Safidy voalohany'
Tsindrio ny 'Network'sign
Haka ny rohy tambajotra azo ampiharina
Push the 'Advancedlakile
Push the 'TCP / IPfanalahidy mba hahitanao ny adiresy IP eo amin'ny router havanana
Voalohany, tadiavo ny làlana mankany: Fampiharana> Fitaovana rafitra> Terminal & manoratra 'ipconfig'. Hahita ny IP an'ny router ianao voatanisa ankoatra ny 'inet addr'.
Raha mampiasa iOS8 na iOS9 ianao, dia mizaha amin'ny Settings> WiFi & tsindrio ireo tamba-jotra tsy misy tariby izay ampifandraisinao ankehitriny. Azo atao ny mahita ny ampahany DHCP hahitanao ny IP an'ny router.
Fampiharana antoko fahatelo fantatra amin'ny anarana hoe Wi-Fi Analyzer no fomba tsotra indrindra amin'ny fitaovana Android. Aorian'ny fampifandraisana amin'ny fampiharana dia tsindrio ny menio 'View' ary safidio ny 'lisitry AP'. Hizaha ny 'mifandraika amin'ny: [Anaran'ny tambajotra]'. Raha mamely azy ianao dia aseho ny varavarankely ny mombamomba ny tambajotra amin'ny IP an'ny router.
Ao amin'ny bara fanaovana, tsindrio ny faritra fampitandremana. Avy eo, tsindrio ny mifandray amin'ny [Networks Name] 'amin'ilay lisitra mipoitra. Tsindrio ny anaran'ny tamba-jotra tsy misy tariby & manaraka amin'ny marika 'Network' mba hampisehoana ny fahalavoana miaraka amin'ny adiresy IP an'ny router.
Fomba hahitana IP default amin'ny router
Mba hahitana ny adiresy IP misy anao an'ny router dia araho fotsiny ireto dingana etsy ambany ireto -
1) ao amin'ny bara fizahana Tsidiho ny menio Start & input CMD eo amin'ny sehatry ny fikarohana.
2) aorian'ny fampidiranao ny baiko CMD dia hiseho ny baiko haingana miaraka amin'ny fisehoana mainty.
3) Soraty ny baiko 'ipconfig', ao anaty baiko haingana. Tafiditra amin'ity baiko ity - asehoy ny toerana misy anao IP sy ny fikirakira ny rafitra miaraka amin'ny router mifandraika amin'izany.
Fomba hamantarana ny router adiresy IP amin'ny Windows
Manorata ao amin'ny Control Panel ao amin'ny bara fikarohana ary tsindrio ilay kisary Takelaka fikirakirana;
Press Jereo ny laharana sy ny lahasa misy tambajotra Internet sy tamba-jotra;
Tsindrio ny anaran'ny Wi-Fi, mba hahitanao ny akaikin'ny Connections;
Hisy varavarankely vao tsy ela izay. Tsindrio ny antsipiriany;
Ho hitanao ny adiresy IP nozaraina amin'ny IPv4 Default Gateway.
Sokajy Ahoana no Post Fikarohana
Avereno amin'ny Default Settings ny Router anao